घरमै बसीबसी यसरी हटाउनुहोस ७ दिनमा अनुहारको चाया पोतो डन्डिफोर ! यस्तो छ घरेलु उपाए भिडियो सहित !
महिला होस् या पुरुष जान्नुहोस् यस्तो कुरा : क्रिम लगाउदा साइड अनुहारमा इफेक्ट हुन्छ कि हुदैन यस्तो छ बास्तबिकता
हेर्नुहोस :अलैंची सेवान गर्दा स्वास्थ्यका लागि कति उपयाेगी हुनेछ ? जान्नुहोस
यसरी बच्नुहोस सर्पले टाेकिहाले !यस्ता उपाय अपनौनुहोस ?
भुइँकटहर खादा शारीरलाई यस्तो छ फाइदा !
यसरी बनाउनु होस् आफ्नो आँखाको ज्योती राम्रो बनाउने घरेलु खानेकुरा ! जान्नुहोस !